Global Voices teny Malagasy » Kanadà: Tanora Indizena Mizara ny Soatoavin-dry Zareo anaty Fifaninanana Lahatsary · Global Voices teny Malagasy » Print
Kanadà: Tanora Indizena Mizara ny Soatoavin-dry Zareo anaty Fifaninanana Lahatsary
Voadika ny 30 Avrily 2011 7:00 GMT 1	 · Mpanoratra Juliana Rincón Parra Nandika avylavitra
Sokajy: Amerika Avaratra, Kanadà, Foko sy Fiaviana, Tanora, Teratany, Zavakanto & Kolontsaina
Tanora indizena (zanatany) avy amin'ny vondrom-piarahamonina Kanadiana efatra samihafa no mizara ny fanantenan-dry zareo, ny tantarany ary ny nofinofiny anaty andianà lahatsary fohy ao amin'ny “Ny Habako. Ny Tantarako”, ka ao ry zareo no miresaka mikasika ireo zavatra manahirana azy ireo amin'ny maha tanora indizena azy. Ny atrikasa dia nokarakarain'ny imagineNATIVE Film + Media Arts Festival, fetibe fanao isan-taona ao Toronto, Canada ka amin'izany no anehoan'ireo indizena ny fomba samihafa ara-javakanto namoronan'izy ireo haikanto fitaratry ny mahamarolafy ny firenena indizena eto amin'izao tontolo izao.
Iray amin'ireo tanora no hahazo fahafahana handeha lavitra sy hampiseho ny rakitsary fohy novokarin-dry zareo ao amin'ny imagineNATIVE festival. Ny mpandresy dia izay ho voafidy amin'ny fifidianana anaty vohikala ao anaty aterineto  alohan'ny 1 May.
Keelan Keeshig avy amin'ny Cape Croker dia tanora zokiny avy amin'ny Parry Sound High School ary ao anatin'ny lahatsariny  izy dia mizara ny fomba iatrehany ireo fanambanimbaniana tsy mitsaha-mitombo: ho azy, izany dia noho ny volo lavany, marika iray mampiavaka ny kolotsaina nentin-drazany izay tsy hainy ny hanazava azy amin'ireo namany mitapa-bolo.
Laura Gagnon  dia Ojibway ary toa feno fampanantenana ny hananany ho avy mamiratra, saingy safidy diso ny nidirany amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina sy ny fisotroana. Tamin'ny alalan'ny fiverenana ifotony tamin'ny fàka ara-panahy sy ara-kolotsainy no nahafahany nahita ny mazava ary efa niverina an-tsekoly ambaratonga faharoa izy ankehitriny, ary manantena ho tonga hatrany amin'ny kolejy sy ho lasa mpanoro hevitra momba ny fiankinan-doha mba ho fanampiana ny hafa.
Sequin D. Williams ao amin'ny Fort Albany First Nation dia manazava  ny fombany mamerimberina fahazarana iray rehefa mandeha mihaza gisa miaraka amin'ny rainy izy: ny rainy ihany koa no nampianatra an-drainy ny fihazàna, noho izany ho an'i Sequin, ny fihazàna dia fomba fifamatorany amin'ny razambeny sy ny fomban-drazana indizena.
Azonao atao ny mahita ireo lahatsary 7 hafa ao amin'ny vohikalan'ny imagineNATION , sady mifidy izay iray mahafinaritra anao : ny mpandresy dia ho tsara vintana hampiseho ny lahatsary fohy novokariny amin'ireo mpanakanto sy mpilalao hafa avy eo amin'ny vondrom-piarahamonin'ny haikanto Indizena ao amin'ny Toronto Film And Media Arts festival .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/04/30/17026/
 fifidianana anaty vohikala ao anaty aterineto: http://www.imaginenative.org/newsdetails.php?id=160
 ao anatin'ny lahatsariny: http://youtu.be/KxWdW73m9fw
 Laura Gagnon: http://youtu.be/FeaqmLO-zJQ
 dia manazava: http://youtu.be/yG7qL3PZzvc
 Toronto Film And Media Arts festival: http://www.imaginenative.org/index.php?y=99